Fanitarana ny seranan-tsambon’i Toamasina : Vita sonia ny famatsiam-bola -
AccueilRaharaham-pirenenaFanitarana ny seranan-tsambon’i Toamasina : Vita sonia ny famatsiam-bola
24/03/2017 admintriatra Raharaham-pirenena 0
Tontosa omaly, teny Antaninarenina, ny fanaovan-tsoniam-piaraha-miasa momba ny fampindramam-bola fanitarana ny seranan-tsambon’i Toamasina, teo amin’ny governemanta malagasy izay soloin’ny minisitry ny Vola sy ny teti-bola tena, Rakotoarimanana Gervais sy ny Jica ( Agence japonaise de coopération internationale) soloin’ny filoha lefitra voalohany, Koshikawa Kazuhiko tena. Tsara marihina fa vola mitentina 638 tapitrisa Dolara no ahafahana manatanteraka ny asa rehetra ao anatin’ny 7 taona, ka 411 tapitrisa Dolara amin’io avy amin’ny Jica ary manana 40 taona ny firenena malagasy mamerina azy tsikelikeky, fa avy amin’ny fanjakana malagasy sy Spat kosa indray ny 227 tapitrisa Dolara. Ity famatsiam-bolan’ny Jica ity dia hahafahan’ny governemanta malagasy hanatrarana ny asa tena ilaina, toa ny fanitarana ny “brise-lame”, ny fanamboarana sy fanitarana tokontany fitoeran’ny “conteneurs”, ny fanadiovana ao anatin’ny seranan-tsambo, sy ny maro hafa. Haharitra 7 taona ny asa fanitarana ary amin’ny faran’ity taona 2017 ity no hanomboka ny asa, araka ny fanambaran’ny tale jeneralin’ny Spat, Avelin Christian Eddy, omaly.
Fantatra fa amin’ny alalan’ity tetikasa ity no ahafahana mahatratra ny tanjona iray entina mampiroborobo ny fampandrosoana ny toekaren’ny Nosy malagasy, satria ity seranam-tsambo ity no voasokajy ho seranana ara-barotra lehibe indrindra eto Madagasikara. Araka ny tatitra azo , avy amin’ny seranan-tsambon’i Toamasina ,ny 82 isan-jaton’ny vola miditra amin’ny kitapom-bolam-panjakana, izay mitentim-bidy eo amin’ny 1,380 miliara Ariary. Fantatra koa fa ny 89 isan-jaton’ny entana miditra eto Madagasikara dia eny amin’ity seranan-tsambo ity hatrany. Ary ho an’ny taona 2016, eo amin’ny 5 tapitrisa taonina eo ny entana niditra teny an-toerana, izay mitentim-bidy any amin’ny 6,080 miliara Ariary, raha toa ka, entana tany amin’ny 492 000 taonina tany no navoakan’i Madagasikara, izay mitentim-bidy, 2,574 miliara Ariary, izay mampiseho ny 46 isan-jaton’ny entana rehetra mivoaka eto Madagasikara. Noho izany, ny fiaraha-miasa eo amin’ny Japoney sy malagasy momba ny fanitarana ny seranan-tsambo dia ahafahana mampitombo ny vola miditra eny an-toerana mba hitazomana sy hanamafisina ny toe-bolan’ny Spat. Fa ahafahana ihany koa manitatra sy manamafy ny fivezivezen’ny entana mba hanatsarana ny fahombiazana amin’ny fikarakarana ireo entana. Entina koa hanabe voho ny toekaren’i Madagasikara amin’ny alalan’ny fivezivezen’ny sambo maro. Fa ankoatra izay, ahafahana mamorona asa sy mamindra teknolojia.
Hiaro hosoka sy fampiasana hosoka niteraka famoizan’aina ve ny avy ao anivon’ny zandarimaria? Mipetraka tokoa izany fanontaniana izany taorian’ny valan-dresaka nataon’ny mpisolovava Soloniaina Andriamaromanana sy ny tompon’ny tany misy ilay fitrandrahana, Randrianarimiadana Alphonse tetsy amin’ny ...Tohiny